Umshini wokubhola umgodi wesibhamu iMirco
Uthi lokuphotha kabili CNC isibhamu imishini umshini
Imishini eyisicefe eyi-TK2180 (umshini we-hole hole trepanning)
T2120G BTA Deep Hole Drilling And Boring Machine Manufacturers | I-China T2120G BTA Deep Hole Drilling And Boring Machine Factory & Suppliers (deepholemachinery.com) 1Uma icubungula imbobo enkulu ye-shaft shaft, indlela yobuciko bendabuko yokucubungula ukubhola nokubhora izokwenza okuningi ...
Umshini wokubhola izibhamu waziwa njengomshini wokumba umgodi ojulile wokumba umsebenzi wokusebenza umgodi oqondile wemboni yokusika insimbi njengethuluzi lomshini noma ukufa. Le mishini ethile enikezwe yi-Drillstar ikhethekile ngezinto zayo eziyindilinga zebha. I ...
indandatho ye-axis emine ifa umshini wokumba umgodi ojulile
Mirco hole hole gun imishini Manufacturers | I-China Mirco hole drilling machine Factory & Suppliers (deepholemachinery.com) ububanzi be-Borehole: φ 1-5mm / φ 3-16mm Ifanele ukucutshungulwa okokusebenza: ukucubungula indandatho yensimbi engagqwali ifela ku-feed granulator Inani lezinto zokuphotha: 4 kuya ku-8 F .. .
Ukunyuswa komgodi wokujula okujulile
Umshini wokumba umgodi ojulile Gxila kubuchwepheshe nekhwalithi Ukwakhiwa okuhle Umshini wokumba umgodi ojulile DS 2-16mm DS2-16mm imbobo ejulile ...
yini ukubhola kwesibhamu?
I-Deep Hole Gun drill i-Gun drill (Through Coolant Drill) i-drill eqondile evumela ukuthi ukusika uketshezi (kungaba umoya ocindezelweyo noma uketshezi olufanele) ukujova ngomzimba oyize we-drill ebusweni obusikiwe. Zisetshenziselwa ukubhola okujulile-ukujula kuya kudayimane ...
indexable gun sokuprakthiza kanye BTA
I-LOGT060204 ingeyezivivinyo zezibhamu phakathi kwe-dia11.5-13.5mm BTA Deep Hole Drill TOGT07-TOGT13 ingezobubanzi besibhamu phakathi kwe-14-32mm Guide pad GPS04 ...
isondo lokugaya isondo
Idayimane lokugaya isondo lihlukile kwesondo elijwayelekile lokugaya elakhiwe ngesakhiwo. Ngokuvamile yakhiwa ungqimba lwedayimane olulimazayo, ungqimba lwezinguquko kanye ne-matrix. Isendlalelo esisebenzayo, esaziwa nangokuthi ungqimba lwedayimane, sakhiwa ...
i-step gun drill ithandwa emigodini yesinyathelo yokubhola
izibhamu ezihamba ngesibhamu noma izibhamu eziqhutshwa ngesibhamu esisodwa noma izibhamu ezinenkomba emigodini engaboni noma emigodini
I-PCD, i-CBN ifaka ekusebenzeni kwensimbi
I-Polycrystalline cubic boron nitride - Isifinyezo sesiNgisi i-PCBN (i-cubic boron nitride) Amathuluzi we-CBN ngokuvamile acubungula izingxenye ze-Cast Iron nezensimbi !!! Amaphesenti ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye. Izici zokusebenza kwethuluzi le-PCBN: 1: Ubulukhuni obuphakeme nokuqina kokugqoka; 2: Izitebhisi eziphakeme ezishisayo ...
Izinhlobo ze-gun drill nezinkundla zokusebenza
Izinhlobo ezine zokuzivivinya ngezibhamu China Deep Hole Gun sokuzivivinya Factory & Sup ...